ဝံလက် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းက ရခိုင်ရှိကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် အသေးစားခေ?? - Yangon Media Group
ဝံလက် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းက ရခိုင်ရှိကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် အသေးစားခေ??
စစ်တွေ၊ နိုဝင်ဘာ ၆- ရခိုင်ပြည် နယ်အခြေစိုက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သော ဝံလက်ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျေးလက်နေပြည် သူများအတွက် အသေးစားချေးငွေ ထုတ်ချေးခြင်းလုပ်ငန်းကို တိုးချဲ့ရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လုပ်ငန်းကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်တွေမြို့နယ်နှင့် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ နယ်များတွင် ထုတ်ချေးနေပြီးလာ မည့်နှစ်တွင် ကျောက်တော်နှင့် မြောက် ဦးမြို့နယ်တွင်လည်း တိုးချဲ့ထုတ် ချေးရန် စီစဉ်နေကြောင်း ဖောင်ဒေး ရှင်းတာဝန်ရှိသူပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
”လောလောဆယ်ကတော့ အခက်အခဲတချို့ကတော့ ရှိနေပါတယ်။ အဓိကတော့ Funding ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကြိုး စားနေပါတယ်”ဟု ယင်းဖောင်ဒေး ရှင်း၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်း မြင့်သိန်းမှ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်က စစ် တွေမြို့၊ ဦးဥတ္တမခန်းမ၌ ကျင်းပ သော ဝံလက်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ (၇) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်း အနားတွင် ပြောသည်။
”ကျွန်တော့်မှာ အရင်ကတော့ ကြက်မွေးပါတယ်။ ကြက်တွေရော ဂါဖြစ်တော့ အားလုံးသေကုန် တယ်။ ဒါနဲ့ဒီက ငွေချေးပြီးတော့ မိန်းမနဲ့အတူ ဆိုင်လေးရောင်းပါ တယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ နောက် လည်း ချေးဦးမှာပါ” ဟု ချေးငွေ ထုတ်ချေးထားသူ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ မှ ဦးသန်းအောင်ကပြောသည်။
ဝံလက်အနေဖြင့် အတိုးနှုန်း အဖြစ် တစ်နှစ်လျှင် ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ပြီး ၂ဝ၁၄ မှစတင်ကာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အထိ စစ်တွေမြို့နယ် နှင့် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်များရှိ ကျေး ရွာပေါင်း ၃၉ ရွာမှ အိမ်ထောင်စု ပေါင်း ၈၅ဝဝ ကျော်အား ကျပ်သိန်း ပေါင်းရှစ်ထောင်ကျော်ကို ထုတ်ချေး ထားပြီးဖြစ်သည်။